7 Android को लागि युवा बच्चाहरु को लागी सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोग र खेलहरू Androidsis
आरोन रिवास | | एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू, एन्ड्रोइड खेलहरू
आज, साना बच्चाहरूका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी व्याकुलता र सिक्ने विधिहरूमा Android फोनहरू सामेल छन्। र यो यो हो, यी र सबै अनुप्रयोगहरू र खेलहरू मार्फत, घरको कान्छोले आफ्नो खाली समयको फाइदा लिन सक्दछ। ठीक यस कारणका लागि हामी तपाईंलाई यो नयाँ कम्पाइलेसन पोष्ट प्रस्तुत गर्दछौं, जुनमा तपाईंलाई फेला पार्नुहुनेछ7सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयोगहरू, उपकरणहरू र बच्चाहरूका लागि खेलहरू।
हामी सब भन्दा चाखलाग्दो खेलहरू र अनुप्रयोगहरू सूचीबद्ध गर्दछ जुन साना बच्चाहरूको लागि गुगल प्ले स्टोरमा हाल उपलब्ध छन्। सबै नि: शुल्क छन् र, निस्सन्देह, तिनीहरूको प्रकारको सब भन्दा राम्रो हो। थप रूपमा, उनीहरूसँग सकारात्मक रेटिंग्स र टिप्पणीहरू छन् जसले यसलाई समर्थन गर्दछ।
तल हामी एन्ड्रोइड फोनका लागि साना बच्चाहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोगहरूको श्रृंखला संलग्न गरेका छौं। यो ध्यान दिन योग्य छ, हामी जहिले पनि गर्छौं, त्यो यस संकलन पोष्टमा तपाईले फेला पार्नुहुने सबै नि: शुल्क छन्। तसर्थ, तपाईं एक वा ती सबै प्राप्त गर्न को लागी कुनै पनि रकम काँटछाँट गर्नुपर्दैन। जहाँसम्म, एक वा बढीसँग आन्तरिक माइक्रो-भुक्तानी प्रणाली हुन सक्छ, जसले उनीहरू भित्र अधिक सामग्री पहुँच गर्न अनुमति दिनेछ, साथै प्रीमियम र उन्नत सुविधाहरू। त्यस्तै, कुनै पनि भुक्तानी गर्न आवश्यक छैन, यो दोहोर्याउन लायक छ। अब हो, यसमा जानुहोस्।
1 बच्चाहरू पृष्ठ रंग गर्दै! बचकाना खेलहरू!
2 बक्सहरूमा पत्रहरू! वर्णमाला सीखने खेलहरू!
3 बच्चाहरूको लागि एबीसी शैक्षिक खेलहरू! पढ्न सिक्नुहोस्!
4 EWA Kids: बच्चाहरूको लागि अंग्रेजी
5 क्यापिटलको प्रतियोगिता
6 बच्चाहरूको लागि अंग्रेजी: सिक्नुहोस् र खेल्नुहोस्
7 मोन्टेसरी प्रीस्कूल
बच्चाहरू पृष्ठ रंग गर्दै! बचकाना खेलहरू!
निस्सन्देह, साना केटाकेटीहरूले सबैभन्दा धेरै मन पराउने कुरा रंगीन छ। त्यसकारण यस प्रकारको खेल यस कम्पाइलेसन पोष्टमा हराउन सकेन, किनकि यो ती क्रियाकलापहरू मध्ये एक हो जुन उनीहरूको मनोरञ्जन गर्दछ र एकै साथ सिर्जनात्मकता, आविष्कार र मानसिक विकासको लागि लाभदायक हुन्छ।
बच्चा कति सानो छ त्यसले फरक पार्दैन। यो अनुप्रयोग those बर्ष र माथिका लागि उपयुक्त छ। मात्र उहाँलाई प्रक्रियामा निर्देशन गर्नुहोस् र बच्चाले यो आफ्नै प्रयोग गर्दछ। तपाईं देख्नुहुनेछ, केहि मिनेट वा अधिक को मामला मा, यो संग समात्नेछ र र नॉन-स्टप रंग शुरू।
यो कला को लागी एक स्वाद प्रोत्साहित गर्न को लागी डिजाइन गरीएको छ र यो १०० प्यारो र करिश्माई वर्णहरूमा रंगिनको साथ साथै दर्जनौं रेखाचित्र र रेखाचित्र र औंला पेंटि paintingको साथ आउँदछ। यसले असंख्य सीख्ने खेलहरू, 100०० भन्दा बढी रमाइलो एनिमेशन र ध्वनिहरू, बच्चाहरूका लागि रंगीन पुस्तक र चित्रकला चित्रहरू, motor बर्ष भन्दा माथि उमेरका बच्चाहरूका लागि खेलहरू, उत्कृष्ट मोटर कौशल विकास गर्न केटीहरूको लागि निःशुल्क खेलहरू, चित्र लेख्ने खेल विकास गर्नका लागि नि: शुल्क गेमहरू पनि प्रस्तुत गर्दछ। बच्चाहरू जनावरहरूको लागि र नि: शुल्क चित्रकला खेलहरूमा एक अभिभावकीय नियन्त्रण सुविधा।
विकासकर्ता: बिनी बाम्बिनी
बक्सहरूमा पत्रहरू! वर्णमाला सीखने खेलहरू!
बक्सहरूमा पत्रहरू! साना बच्चाहरूको लागि अक्षरहरू सिक्नको लागि असंख्य विधिहरू र खेलहरू भएको एउटा अनुप्रयोग हो। यो घरको कान्छोका लागि धेरै नै डिडेक्टिक, पेडेगोगिकल र मनोरन्जनकारी उपकरण हो, र तिनीहरूको विकास र मानसिक बृद्धिमा मद्दत गर्ने उद्देश्य छ, २ देखि old वर्ष उमेरका बच्चाहरूको लागि विभिन्न पढ्ने सीखाहरू प्रस्तुत गर्दै। यो ठूला बच्चाहरूमा पनि प्रभावकारी हुन सक्छ, तर यसको ध्यान सबैभन्दा कान्छोमा छ।
यो अनुप्रयोगसँग छ खेलहरू जसमा बच्चाहरूले शिकार गर्नुपर्दछ र अक्षरहरू समाहित गर्नुपर्दछ र सरल शब्दहरू बनाउँन र निर्माण गर्नका लागि अक्षरहरू जीवन्त र निकै प्यारा हुन्छन्, त्यसैले तिनीहरू लगातार बच्चाहरूबाट ध्यान आकर्षित गर्न साना बच्चाहरूको ध्यान आकर्षित गर्दछन्।
बच्चाहरूले बक्सहरूमा अक्षरहरूको साथमा वर्णमाला पनि सिक्न सक्दछन्, किनकि यसले सबै अस्तित्वहरू प्रयोग गर्दछ, त्यसैले तिनीहरू सबै प्रयोग गर्न सिक्न सक्छन्। यस अनुप्रयोगको डिडक्टिक उपकरणहरूको साथ, बच्चाहरू पनि शब्दहरूको ध्वनिहरू सिक्न, साथै तिनीहरूको अर्थहरू कसरी र कहिले प्रयोग गर्ने सिक्दछन्।
शब्दहरू निर्माण गर्न उसले प्रस्तुत गर्ने सबै पजलहरू शिक्षण उद्देश्यको लागि हो; तिनीहरूलाई हल गर्दा, छवि उत्पन्न हुन्छ जसले शब्दहरूको ग्राफिक वर्णन दिन्छ। त्यहाँ १०० भन्दा बढी शब्दहरू छन् जुन बच्चाहरूले यस अनुप्रयोगमा खेलहरूका एनिमेटेड पत्रहरू द्वारा प्रस्तुत गरिएको रमाइलो गतिशीलतालाई धन्यवाद दिन सिक्न सक्छन्।
बच्चाहरूको लागि एबीसी शैक्षिक खेलहरू! पढ्न सिक्नुहोस्!
बच्चाहरूको लागि एबीसी शैक्षिक खेलहरू! children देखि years वर्ष उमेरका बच्चाहरूको लागि अर्को ठूलो अनुप्रयोग हो। यो सिक्ने असक्षमता भएका बच्चाहरू र प्राथमिक विद्यालयमा भएकाहरूका लागि पनि धेरै शिक्षितिक हो, जुन शैक्षिक खेलहरू र अक्षरहरू, शब्दहरू, शब्दावली र वर्णमालाको बारेमा ग्राफिक्स मार्फत एउटा मनोरन्जनात्मक र रमाईलो तरिकाले प्रस्तुत गर्दछ सबै सामग्री दिए।
बच्चाहरू बच्चाहरूको लागि एबीसी शैक्षिक खेलहरू प्रयोग गर्दै! तिनीहरू शब्दहरू र सिलेबलहरू छिटो बनाउन, पढ्न, र उच्चारण गर्न सिक्दछन्। वर्णमाला पहिचान र प्रयोग गर्न को लागी। अर्को कुरा त्यो हो तिनीहरूले साधारण शब्दहरू लेख्न सिक्नेछन्, र त्यसपछि लामो र अधिक जटिल शब्दहरू लेख्न अगाडि बढ्नेछन्। यो एक राम्रो शिक्षा सहयोगी हो, कुनै श doubt्का बिना, अझ बढि यदि बच्चासँग केही सिक्ने कठिनाइ र ध्यान घाटा छ, किनकि यस अनुप्रयोगमा एनिमेसन, र colors्ग र सबै खेलहरू धेरै इमर्सिभ र मनोरन्जनकारी छन्।
एकै समयमा, यो अनुप्रयोगले बच्चाहरूलाई शब्दहरू बुझाउन मद्दत गर्दछ, केवल लेख्नुहोस् र तिनीहरूलाई उच्चारण गर्नुहुन्न। बच्चाहरूलाई व्यावहारिक तरिकामा यसको अर्थहरू सिक्न बनाउँदछ।
बच्चाहरूको लागि यो अनुप्रयोगको प्रभावकारिता यसको रेटिंगमा 4.3.. stars भन्दा बढी तारे, million मिलियन भन्दा बढी डाउनलोडहरू र २ than हजार भन्दा बढी सकारात्मक टिप्पणीहरूको प्रदर्शनमा प्रदर्शित हुन्छ। कुनै चीजको लागि होईन जुन यो कोटिमा सर्वाधिक प्रयोग गरिएको र डाउनलोड गरिएको हो।
शैक्षिक खेल पत्र खेल पढ्न जान्नुहोस्
EWA Kids: बच्चाहरूको लागि अंग्रेजी
तपाईंले सम्भवतः पहिले नै अ the्ग्रेजी सिक्नको लागि EWA अनुप्रयोग सुन्नुभएको छ, र यो Play Store मा मूल अनुप्रयोगको असीम लोकप्रियताको कारण हुन सक्छ, जसमा १० करोड भन्दा बढी डाउनलोडहरू र 10-स्टार रेटिंग छ। इडब्ल्यूए किड्स: अ for्ग्रेजीका लागि बच्चा एउटा संस्करण हो जुन कान्छोका लागि अभिप्रेरित हो, शिक्षण र सिकाई विधिहरू कान्छोका लागि अनुकूल छ।
साना बच्चाहरूले दिनको १ 15 मिनेट मात्र प्रयोग गर्न यो अनुप्रयोग प्रयोग गर्न सक्दछ, जुन ज्ञान जम्मा गर्न पर्याप्त हुन्छ। जहाँसम्म, छिटो र दिगो परिणामहरूको लागि, लामो राम्रो छ। यो पनि छ रेखाचित्र, प्रतिनिधित्व र, पाठ्यक्रम, बिभिन्न खेलहरू जसले बच्चालाई अ English्ग्रेजीको शिक्षा सिकाउँदछन्। यो धेरै डिआक्टिक हो र युवा बच्चाहरूमा भाषाको अवशोषणको लागि धेरै विधि र विधिहरू प्रस्तुत गर्दछ।
यो दर्जनौं पाठहरू, आधारभूत पाठ्यक्रमहरू, र सिकाई प्रक्रियामा मद्दतको लागि अनुवादहरू, साथै साधारण पजलहरू र खेलहरूको साथ आउँदछ। यसले अनुवाद र चित्रको साथ सयौं पुस्तकहरू पनि प्रदान गर्दछ जुन आधारभूत अंग्रेजीलाई कायम राख्न मद्दत गर्दछ। यदि यो पर्याप्त थिएन भने, यसले अडियोहरूको माध्यमबाट धेरै शब्दहरू प्रतिनिधित्व गर्दछ ताकि बच्चाले कसरी तिनीहरूलाई उच्चारण गर्ने जानोस्।
विकासकर्ता: लिथियम ल्याब Pte लिमिटेड
क्यापिटलको प्रतिस्पर्धा सानाको लागि एक उत्तम अनुप्रयोग र उपकरण हो जान्नुहोस् जुन विश्वमा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण शहरहरू र राजधानीहरू हुन्। यो अनुप्रयोगको साथ, साना बच्चाहरूले भूगोल र धेरै देशहरूको बारेमा सिक्नेछन्।
प्रश्न र बहु-विकल्प खेलहरू मार्फत, बच्चाहरूले प्रत्येक देशका लागि कुन क्यापिटलहरू सहि छन् भनेर पत्ता लगाउन सक्षम हुनेछ। यस खेलले एनिमेसनहरू, साना बच्चाहरूको लागि कार्टुनिस ग्राफिक्स आदर्श, र एक मनोरंजक साउन्डट्र्याक समावेश गर्दछ। उहि समयमा यसले देशहरूका स्मारकहरू, प्रत्येकको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा, झण्डा, क्षेत्रहरू, महादेशहरू र अधिकको बारेमा सिकाउँदछ। यसले १० निःशुल्क खेल मोड र mod कठिनाई स्तरहरू समावेश गर्दछ जुन सजिलै समायोजित गर्न सकिन्छ।
बच्चाहरूको लागि अंग्रेजी: सिक्नुहोस् र खेल्नुहोस्
जस्तो कि हामीलाई थाहा छ कि अ learning्ग्रेजी सिक्ने घरका बच्चाहरूका लागि सब भन्दा उत्पादक चीजहरू मध्ये एक हो, हामी तपाईंलाई यसको लागि अर्को अनुप्रयोग ल्याउँदछौं, जुन त्यो पनि यसको प्रकारको सबैभन्दा राम्रो भएको एक हो, यसको कार्यहरूको दायरा, खेलहरू दिएर। र ड्याडेटिक गाइडहरू बिभिन्न विषयहरू जस्तै शब्दहरू, संख्याहरू, र suchहरू, आकारहरू, हप्ताका दिनहरू, बर्षका महिनाहरू, फलफूल, तरकारीहरू, जनावरहरू, पक्षीहरू, खाना, कपडा, भान्छा, बाथरूम, बैठक कोठा, स्कूल र शब्दहरू मार्फत शब्दहरू सिक्नको लागि। खेलकुद।
यो अनुप्रयोग लेखनको माध्यमबाट अंग्रेजी शब्दहरू फेला पार्ने र गठन गर्ने खेलहरूको साथ आउँदछ। यो पनि सुविधा ड्याडेटिक पजलहरू र उनीहरूको अंग्रेजी कक्षामा मद्दत गर्ने साना बच्चाहरूको लागि शिक्षा शिक्षण विधिहरू र, यदि तिनीहरू कुनैमा छैनन् भने अर्को भाषाहरूको लागि पनि स्वाद लिन। यससँग, बच्चाहरूले चाँडै आधारभूत अंग्रेजी सिक्नेछन्।
बच्चाहरूको लागि अंग्रेजी
एन्ड्रोइड प्ले स्टोरमा उपलब्ध बच्चाहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोगहरू र खेलहरूको यो कम्पाइलेसन पोष्ट समाप्त गर्न हामीसँग मोन्टेसरी प्रीस्कूल छ, एक सानो पूर्ण अनुप्रयोग जसमा साना बच्चाहरूका लागि धेरै गतिविधिहरू र डिओक्टिक अभ्यास हुन्छन् र ती बच्चाहरू जसलाई बुझ्ने र सिक्ने हुन्छन्। दुबै दैनिक जीवन र स्कूल मा समस्याहरू।
यस अनुप्रयोगले र colors्ग, आकार, उच्चारण, सरल र जटिल शब्दहरूको पठन, संख्या, थप, घटाउ, संगीत र अधिकको रूपमा विषयहरूमा सौदा गर्दछ। तसर्थ, यो शिक्षण र सिकाउनको लागि सबैभन्दा पूर्ण हो। यो to देखि years बर्ष बच्चाहरुमा विशेषज्ञता प्राप्त छ, तर यो उमेरका बच्चाहरूको लागि पनि उपयुक्त हुन सक्दछ जसले प्रारम्भिक उमेरमा आधारभूत कुराहरू सिकेका छैनन्। यो एक भर्चुअल कक्षा कोठा जस्तै काम गर्दछ र प्रेरित रहन, यो एक पुरस्कार प्रणाली प्रदान गर्दछ कि बच्चाहरू सिक्न मा लगाउँछ।
विकासकर्ता: EDOKI अकादमी
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू »7एन्ड्रोइडको लागि युवा बच्चाहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोगहरू र खेलहरू